Nandrolone Phenylpropionate (NPP) အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း - စက်ရုံ
ကုန်ကြမ်း Nandrolone Phenylpropionate (NPP) အမှုန့် (62-90-8)
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) အမှုန့် (62-90-8) ကြွက်သားထုထည်နှင့်ခွန်အားကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်မြှင့်တင်ရန်အတွက်အသုံးပြုကြောင်းတစ်ခုဟို Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ က nandrolone decanoate နှင့်အတူအလွန်ဆင်တူသည်။
ကုန်ကြမ်း Nandrolone Phenylpropionate (NPP) အမှုန့် (62-90-8) ကဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း Nandrolone Phenylpropionate (NPP) အမှုန့် (62-90-8) ဖျေါပွခကျြ
Nandrolone phenylpropionate (NPP) အမှုန့်တစ်ဒြပ်ဟို-အန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုး (AAS) ဖြစ်ပါသည်နှင့် 1 (2) testosterone ဟော်မုန်း၏ analogue -dehydrogenated ။ Nandrolone phenpropionate ကိုလည်း 3-phenylpropionate Ester ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဟိုအေးဂျင့်နှင့်တစ်ဦးအန်ဒရိုဂျင်အဖြစ်အခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်။ ဒါဟာ phenylpropionate သာအသုံးပြုသောသို့မဟုတ်ဤမူးယစ်ဆေးခေါ်ဆောင်သွားပြီတစ်ဦးချင်းစီမှာတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ nandrolone.Nandrolone ကနေဆင်းသက်လာ။ ဒါဟာအန်ဒရိုဂျင်နှင့်ဟိုဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူတစ်ဦး C18 Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာယေဘုယျအား 19 အနေအထားမှာ testosterone ဟော်မုန်းပေမယ့်ဒီထက်တဦးတည်းကာဗွန်တူမှ estradiol ၏ alkyl အီကနေပြင်ဆင်သည်။ ဒါဟာအမေရိကန် Nandrolone အတွက် III ကိုမူးယစ်ဆေးတစ်ခုအန်ဒရိုဂျင် receptor agonist ဖြစ်ပါတယ်တစ်ဦးအချိန်ဇယားဖြစ်ပါတယ်။ ကနျူကလိယဝင်နှင့်မျိုးရိုးဗီဇကို DNA ကို၏တိကျသောဘေ့ပာတိုက်ရိုက်ချည်နှောင်ဖို့ခွင့်ပြုသည့်အဲဒီ receptor ရှုပ်ထွေးသောမှခညျြနှောငျအဆိုပါမူးယစ်ဆေး။ binding ၏ဒေသများအတွက်အန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်ဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင် (HREs) လို့ခေါ်တဲ့နှင့်အချို့မျိုးဗီဇ၏မှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှုသြဇာလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်။
ကုန်ကြမ်း Nandrolone Phenylpropionate (NPP) အမှုန့် (62-90-8) Specifications
ထုတ်ကုန်အမည် ကုန်ကြမ်း Nandrolone Phenylpropionate (NPP) အမှုန့်
ဓာတုအမည် • NPP
အမှတ်တံဆိပ် NAmE Durabolin
CAS အရေအတွက် 62-90-8
InChIKey UBWXUGDQUBIEIZ-QNTYDACNSA-N ကို
မော်လီကျူး Formula C27H34O3
မော်လီကျူး Wရှစ် 406.56
Monoisotopic Mass 406.251 g / mol
အရည်ပျော် Point 85-87 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ရေဆူမှတ် 487.61 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (ကြမ်းတမ်းခန့်မှန်းချက်)
ဇီဝဗေဒတစ်ဝက်-ဘဝ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 12 ရက်ပေါင်း
အရောင် အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင် Crystal Powder ချွတ်
Storage Temperature ထိန်းချုပ်ပစ္စည်း, -20? ကို C ရေခဲသေတ္တာ
Application ကုန်ကြမ်း Nandrolone Phenylpropionate (NPP) အမှုန့်အဓိကအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေအတွက်အဆင့်မြင့်ရင်သားကင်ဆာ၏ကုသမှုအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးအတွက်အိုမင်းသောသို့မဟုတ်သွေးဆုံးပြီးသားအရိုးပွရောဂါ၏ကုသမှုများအတွက်တွဲဖက်ကုထုံးအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း Nandrolone Phenylpropionate (NPP) အမှုန့် (62-90-8) ဆိုတာဘာလဲ?
Nandrolone Phenylpropionate တစ် 19-nortestosterone (19-မဟုတ်သလို) ဟိုအန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ 19-မဟုတ်သလိုခွဲခြားကာဗွန်အက်တမ်ဟာ 19th အနေအထားမှာဖယ်ရှားခဲ့ပြီးကြောင်းအတွက် testosterone ဟော်မုန်းဟော်မုန်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအပြောင်းအလဲကျွန်တော်တို့ကို Nandrolone ပေးသည်, ထိုတိုတောင်းသော Phenylpropionate Ester ဖြည့်စွက်အားဖြင့်ငါတို့သည် Nandrolone Phenylpropionate ရှိသည်။
အဆိုပါ Steroid တစ်မျိုး function ကို၏အခြေခံတွင်, Nandrolone Phenylpropionate Nandrolone Decanoate မှတူညီသည်။ နှစ်ဦးစလုံးပုံစံများတူညီတက်ကြွဟော်မုန်း၏ဖွဲ့စည်း။ NPP ၏အမှု၌ဆေးထိုးပြီးနောက် Nandrolone ၏ပိုကြီးတဲ့ပေါကျကှဲပေးသည်, ဒါပေမယ့်လည်းအများကြီးတိုတောင်းဝက်ဘဝသယ်ဆောင်တဲ့တိုတောင်း Ester ဗားရှင်း။ ဤအသှေးကိုအဆင့်ဆင့်တည်ငြိမ်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်းလျှင် Nandrolone Phenylpropionate ပိုပြီးမကြာခဏသူ့ရဲ့ပိုကြီး Ester ရှိသော counterpart ထက်ထိုးသွင်းဆိုလိုသည်။
ကုန်ကြမ်း Nandrolone Phenylpropionate (NPP) အမှုန့် (62-90-8) အကျင့်ကိုကျင့်
Nandrolone phenpropionate သာအသုံးပြုသောသို့မဟုတ်ဤမူးယစ်ဆေးခေါ်ဆောင်သွားပြီတစ်ဦးချင်းစီမှာတွေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအန်ဒရိုဂျင်နှင့်ဟိုဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူတစ်ဦး C18 Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာယေဘုယျအား 19 အနေအထားမှာ testosterone ဟော်မုန်းပေမယ့်ဒီထက်တဦးတည်းကာဗွန်တူမှ estradiol ၏ alkyl အီကနေပြင်ဆင်သည်။ ဒါဟာအမေရိကန် Nandrolone အတွက် III ကိုမူးယစ်ဆေးတစ်ခုအန်ဒရိုဂျင် receptor agonist ဖြစ်ပါတယ်တစ်ဦးအချိန်ဇယားဖြစ်ပါတယ်။ ကနျူကလိယဝင်နှင့်မျိုးရိုးဗီဇကို DNA ကို၏တိကျသောဘေ့ပာတိုက်ရိုက်ချည်နှောင်ဖို့ခွင့်ပြုသည့်အဲဒီ receptor ရှုပ်ထွေးသောမှခညျြနှောငျအဆိုပါမူးယစ်ဆေး။ binding ၏ဒေသများအတွက်အန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်ဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင် (HREs) လို့ခေါ်တဲ့နှင့်အချို့မျိုးဗီဇ၏မှတ်တမ်းလှုပ်ရှားမှုသြဇာလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်။
ကုန်ကြမ်း Nandrolone Phenylpropionate (NPP) အမှုန့် (62-90-8) သောက်သုံးသော
ဆေးပညာ setting ကိုခုနှစ်တွင်စံအထီး Nandrolone Phenylpropionate ဆေးများပုံမှန်ရက်သတ္တပတ်အကွာအဝေးလျင် 50-100mg ကျပါလိမ့်မယ်။ အမျိုးသမီးအသုံးပြုမှုများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောလျှင်အများအားသတ်မှတ်ထားသောမဟုတ်ပေမယ့်ဒါဟာပုံမှန်ရက်သတ္တပတ်အကွာအဝေးလျင် 50mg ဖြစ်လိမ့်မည်။ အားလုံးနီးပါးဆေးဝါးကုသမှု setting များကိုခုနှစ်တွင် Decanoate ဗားရှင်းသတ်မှတ်ထားသော။
အဆိုပါအားကစားသမားသို့မဟုတ်ကာယဗလမယ်ဆေးများကိုအလွန်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်သည်။ တစ်ပတ်ကို 100mg သိသိသာသာတိုးတက်ပြန်လည်နာလန်ထူသေချာပါလိမ့်မယ်တစ်ပတ်ကို 200mg ဒီအဖြစ်ကိုပိုမိုဘုံဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူအရေးပါသောကုထုံးအားသာချက်များကိုပါလိမ့်မယ်။ အများဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်စက်ဝိုင်းများတွင်တစ်ပတ်လျှင် 300-400mg ဘုံထိုးအကွာအဝေးရှိလိမ့်မည်, ဤကြွက်သားတစ်ရှူးတည်ဆောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဘို့ပြီးပြည့်စုံအကွာအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကပိုပြီးသုံးပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဆေးထိုး၏ပုံမှန်အားဖြင့်အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုတစ်ခုသည်အခြားနေ့ရက်ကိုအခြေခံပေါ်မှာထွက် week.Planned နှုန်းသုံးခုတန်းတူထိုးသို့ခွဲစုစုပေါင်းထိုးကိုအသုံးပြုပါ။ 8-12 ရက်သတ္တပတ်အများစုအားကစားသမားများအတွက်အသုံးပြုမှု၏ပုံမှန်ကာလ။ virilization ရှောင်ကြဉ်လျှင် 4-6 ရက်သတ္တပတ်များနှင့်ပုံမှန်ထိုးဘို့တစ်ပတ်ကို 50mg ထက်မပို Steroid တစ်မျိုးကိုအသုံးပြုဖို့သူခြွင်းချက်အမျိုးသမီးအားကစားသမား။
ကုန်ကြမ်း Nandrolone Phenylpropionate (NPP) အမှုန့် (62-90-8) အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
တိုးမြှင့် IGF-1 ထုတ်လုပ်မှု
တိုးမြှင့် Collagen Synthesis & အရိုးသတ္တုအကြောင်းအရာ
NPP လည်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများတွေရဲ့ array ဆက်ဆံဖို့အလို့ငှာအသုံးပြုသည်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်ကြွက်သားများနာမကျန်းနှင့်အတူလူနာ may အဖြစ် HIV နှင့်ကင်ဆာနှင့်အတူလူနာကဆေးထိုးအပ်မှအကြိုးခံစားစေနိုင်သည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာ, သွေးအားနည်းနေသောသူတို့ကိုအကြိုးရှိနိုငျသညျ။ Nandrolone Phenylpropioniate အမှုန့်နဲ့ကုသစေခြင်းငှါအရာအခြေအနေများ၏အခြားဥပမာများရင်သားကင်ဆာ, သွေးအားနည်း, pituitary dwarfism, လေးနက်မီးလောင်ဒဏ်ရာ, အနာ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာပြဿနာများ (ကလေးများအတွက်) နှင့်အရိုးပွရောဂါပါဝင်သည်။
Buy ကုန်ကြမ်း Nandrolone Phenylpropionate (NPP) အမှုန့် (62-90-8) Buyaas.com ထံမှ
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Cycle, ရလဒ်များ, အကျိုးကျေးဇူးများ, သောက်သုံးသော
နန်, R. , ဝဲလ်, JS, & ဗန် Hout, MC (2017) ။ စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်: အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်ပုံရိပ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်-တိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေး (iped) ၏ထိုးသွင်းအသုံးပြုခြင်း။ ရပ်ရွာကျန်းမာရေး & လူမှုရေးစောင့်ရှောက်မှု, 25(5), 1459-1531 ။
Roussel Geste, ဂျေ, & Maldonado-Vlaar, CSC (2016) ။ ကိုကင်းအေးစက်နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးကြွက်များတွင်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူအပေါ် subchronic ဟိုအန်ဒရိုဂျင်စတီရွိုက်၏ဆိုးကျိုးများ(စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်း Doctoral) ။
Piacentino, ဃ, D ကို Kotzalidis, G. အ, del Casale, အေ, Rosaria Aromatario, အမ်, Pomara, C တို့, Girardi, P. , & Sani, G. အ (2015) ။ အားကစားသမားများတွင်ဟို-အန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးအသုံးပြုခြင်းနှင့် psychopathology ။ တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ လက်ရှိ neuropharmacology, 13(1), 101-121 ။
နန်, R. (2017) ။ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် Image ကို Enhancer မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ Injection အသုံးပြုမှုတစ်ခု Ethnopharmacological လေ့လာမှု (PIED) Volumes ကိုငါ & II ကို(စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်း Doctoral) ။
Jardí, အက်ဖ်, Laurent, MR, ဒူဘွာ, V. ကင်မ်, N. , Khalil, R. , Decallonne, ခ ... & Claessens, အက်ဖ် (2018) ။ အထီးကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အန်ဒရိုဂျင်နှင့်အီစထိုဂျင်အရေးယူ: ကြွက်သားကျော်လွန်တဲ့။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်၏ဂျာနယ်, Joe-18 ။
ကုန်ကြမ်း Nandrolone Decanoate (DECA) အမှုန့် (360-70-3)